Android သတိပေးစနစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ Androidsis
Android သတိပေးစနစ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်စွာပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ။ အံ့မခန်း !!
Francisco Ruiz | | Android application များ, Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်လိုက်ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူ ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ပြရန်၊ အကြံပြုရန်နှင့်သင်ကြားရန်ကျွန်ုပ်သွားမည့် Android အတွက်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုပြုလုပ်နေသည်။ ကျွန်တော်စာသားသွားသည့်လျှောက်လွှာ Android သတိပေးစနစ်ကိုပြောင်းပါအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးရောင်စုံ Heads-up အကြောင်းကြားချက်များနှင့်အတူကြိုက်နှစ်သက်သည်။
ယခုဗွီဒီယို post တွင်ယခုတင်ပြမည့်လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်သည့်ပြ,နာကိုချန်လှပ်ထားခြင်း၊ အထူးသဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်အတွက်အထူးချိန်ညှိချက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသတိပေးစနစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးခြင်း.
ကျွန်ုပ်ပြောနေသည့်အရာသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Google Play စတိုးမှနာမည်အောက်ရှိတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် EDGE MASK - Notification layout သို့ပြောင်းပါ။ ဤလိုင်းများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Google Play စတိုးမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်သေတ္တာတစ်လုံးထားရှိသည်
သင်၏ Android ကိုအခမဲ့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အရာအားလုံး !!
1 အခမဲ့ EDGE MASK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ - Google Play စတိုးမှအသိပေးချက်ပုံစံကိုပြောင်းပါ
2 EDGE MASK မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး - အသိပေးချက်များ၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲပါ
အခမဲ့ EDGE MASK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ - Google Play စတိုးမှအသိပေးချက်ပုံစံကိုပြောင်းပါ
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Android အတွက်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ application ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမှာပါ။ Android သတိပေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြီးအပြည့်အဝပြောင်းလဲပါ.
၎င်းသည်အားလုံးမဟုတ်သော်လည်း Android notifications ၏ visual system ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းသောဖြစ်နိုင်ခြေများအပြင်၎င်းသည်အခြားထူးခြားချက်များကိုလည်းပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android မျက်နှာပြင်၏ထောင့်များကိုလှည့်ပတ်ရန်ရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ်သောအခြားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း Edge ဆိပ်ကမ်း၏စတိုင်၌အလင်းသတိပေးချက်များကို enable.
ဒီနေရာတွင် EDGE MASK မှပေးထားသောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံး၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - အသိပေးချက်များ၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲပါ၊ ၎င်းသည်ရက်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးနောက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုနိုင်သည်။
Google Play Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးထားသည်။ နေ့တိုင်းမွမ်းမံ !!
EDGE MASK မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး - အသိပေးချက်များ၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲပါ
Pop-up အကြောင်းကြားစာ layout ပြောင်းလဲမှု။
အံ့သြဖွယ် Riple- စတိုင်အကြောင်းကြားစာဒီဇိုင်း။
ဆမ်ဆောင်းဆိပ်ကမ်း၏ပုံမှန် Edge lighting အကျိုးသက်ရောက်မှု။
popup notification ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပြောင်းလဲရန်အင်္ဂါရပ်။
သင်အကြိုက်ဆုံးအပလီကေးရှင်းများ၏အသိပေးချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာ (သို့) စစ်ထုတ်ရန်ရှိသော်လည်းအပြောင်းအလဲများသည်လျှောက်လွှာအားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android မျက်နှာပြင်၏ထောင့်များကိုလှည့်လည်ရန်ထို function ကိုသုံးနိုင်သည်။
၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံပြီးရှုပ်ထွေးသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီးရွေးချယ်စရာများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများစွာဖြင့် configure လုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာအသစ်များနှင့်မကိုက်ညီလျှင်အသုံးပြုသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်သည် ကနှင့်အဘို့ပြုနိုင်သည် Android သတိပေးချက်စိတ်ကြိုက်,
ဒီကိစ္စမှာ၊ ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာသင့်ကိုထားခဲ့တဲ့ application ရဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုအစမှအဆုံးကြည့်ဖို့သင့်အားအကြံပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android သတိပေးစနစ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်စွာပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ။ အံ့မခန်း !!
Amazon ရှိ Koogeek အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေး
Fortnite အသစ် update တွင်ဒိုင်းလွှားနှင့်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်ဒြပ်စင်အသစ်များထပ်ထည့်ထားသည်